Zidane oo si weyn u amaanay shaqadii adkayd ay soo kaqbteen ciyaartoydiisa kahor kulanka finalka Champions League – Gool FM
Zidane oo si weyn u amaanay shaqadii adkayd ay soo kaqbteen ciyaartoydiisa kahor kulanka finalka Champions League
(Real Madrid) 25 Maajo 2018. Zinedine Zidane ayaa ka hadlay shir jaraa’id kahor kulanka Liverpool habeen dambe ee sabtida ay ku wada ciyaari doonan finalka Champions League, waxaana kulankan martigelin doona caasimadda Ukraine ee Kiev.
“Waxaan halkan u joognaa inaan qabano shaqo adag, waxaan sameynay shaqo badan si aan u gaarno finalka, tani ma ahan mid fudud, waxaan ku faraxsanahay inaan markale ciyaareyno final”.
“Waxaan dareemayaa wanaag, waan jeclahay tartanka, waxaana ka shaqeenayaa Real Madrid, taas ayaana iga caawin doonta inaan gaaro ujeeda walba oo suurtagal ah”.
“Waxaan u arkaa Cristiano Ronaldo inuu aad u wanaagsan yahay, bari waxaan ciyaareynaa kulankeena ugu dameeyay ee xili ciyaareedkan, wuxuu xiiseenayaa inuu ciyaaro kulankan oo kale”.
“Waa inaan go’aan ka gaaraa, waa muhim in ciyaartoyda qaarkood ay kursiga keydka fariistan, laga yaabee in ciyaaryahanka uu dareemo niya djab, laakiin marka ay ciyaarta bilaabato, kooxdu waa mid mideysan, taas waa inaan sameynaa”.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan ciyaarno finalka kale, waa fursad aan mar kale dib u soo noqon doonin, sidaas darteed waa inaan ka faa’iideysanaa.”
“Tani waa mid ku xiran nolosha, hadii uu cadaadis jiro beri waa wax iska caadi ah, waa wax fiican, waa wax qurux badan mana jiraan wax dhici doona”.
Samuel Umtiti oo ka hadlay wadahadalada heshiis kordhinta ee u dhexeeya isaga iyo kooxdiisa